ကိုယ်ချင်းစာတတ်ရင်ကောင်းမယ်………. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Health & Fitness » ကိုယ်ချင်းစာတတ်ရင်ကောင်းမယ်……….
Posted by ko no on Oct 6, 2011 in Health & Fitness |4comments
ကျွန်တော်တင်ပြချင်တာတစ်ခုရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ.ကျွန်တော်စာအရေးအသားညံဖျင်းမှုကြောင်.စာဖတ်သူတွေစိတ်ဝင်စားမှုမရှိကြောင်း ကွန်မန်.တွေကနေတဆင်.သိနေရပါတယ်။ TBေ၇ာဂါဝေဒနာရှင်တေါမပျောက်ဘဲဖြစ်နေတာဘာကြောင်.လဲ။သူတို.ဆေးဝါးအစစ်အမျန်မရလို.ပါ။ဒိတ်ကုန်နေတဲ.ဆေးတေါကသူတို.ကိုသတ်နေတာပါ။မြို.နယ် NTP ကဒါတွေပဲပေးနေပါတယ်လို.ဆေးဝေပေးသူကပြောပါတယ်။သူတို.ကအမှန်လား။NTP ကမှန်လား မသိတော.ပါဘူး။ ဒါပေမဲ.ပြသနာကတော.တက်နေတာအမှန်ပဲ။ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲသေကုန်ကြတောမှာပေါ့။ပခုက္ကူ ကဆေးပေးဝေနေတဲ.သူတွေရဲ.နာမည်တွေကိုတော.ထည်.မရေးချင်သေးပါဘူး။ရေးလိုက်ရင်အိုးစားကွဲကုန်တော.မယ်။ကျွန်တော်တို.မြို.နယ်ကမြွေဆိပ်ဖြေဆေးနဲ.ပတ်သက်ပြီးနာမည်ကြီးပြီးပြီ။အခုလည်းဒီလိုဇာတ်ခင်းနေတာလား။ကျွန်တောရဲ.အဖေကိုယ်တိုင်ကဝေဒနာရှင်ဆိုတော. တော်တော်ဒေါသထွက်တယ်။လူတွေက ဘယ်သူသေသေလူစားမျိုးတေါများလာရင် နိုင်ငံတော်အတွက်စိုးရိမ်စရာပဲ။
ကျွန်တော်က ကွန်မန်.တွေဖတ်ပြီး ကိုကသဘောကျတတ်ပါတယ်။အခုဟာက ကျွန်တော်အဖေပြသနာပါ။ဘာလဲဆိုတော. အဖေက TB ဖြစ်တယ်။ဆေးစစ်တယ်။ထောက်ခံချက်၇ပြီးဆေးတောင်းသောက်ရတယ်။အဲဒီမှာ စစသောက်သောက်ချင်းလတွေမှာပုံမှန်ဆေးကောင်း ဒိတ်ကောင်းရတယ်။ ဆေးသောက်ပြီး5လမြောက်မှာ ဆေးဒိတ်တွေကုန်နေတာတွေပေးလာတယ်။ဒိတ်လွန်နေတဲ.ကဒ်တွေမှာဒိတ်မမြင်ရအောင် ကပ်ကြေးနဲဖြတ်လာတယ်။အဲဒီမှာကျွန်တော်ကကန်.ကွက်တယ်မသောက်နိုင်ပါဘူးအဲဒီတော.ကောင်းတာနဲ.လဲပေးပါလို.ပြောရတယ်။သူတို.ကဘာမျမဖြစ်ပါဘူးသောက်ပါလို.ပြောတယ်။
ကျွန်တော်ကတော.မရဘူးပြောတော.သူတို.သိပ်မကျေနပ်ဘူး။ဆေးကသူတို.ဆီမှာမရှိဘူး သူတို.လည်းဒါတွေပဲရတာလို.ပြောတယ်။ဆေးရုံကြီး NTP ကကိုပဲဒါတွေပေးနေတာလို.ပြောပါတယ်။အဲဒါပါပဲ အခုတော.၀ယ်စားရတော.မယ်လေ ကျန်းမာရေးစောင်.ေ၇ှာက်မှုတွေရဲ. အားနည်းချက်တွေလားမသမာသူတွေရဲ.လက်ချက်လား မသိတော.ပါဘူး ခင်ဗျားတို.စဉ်းစားသာကြည်.ပါတော.ဗျာ
ဖတ်ချင်ပါတယ် သေသေချာချာလေး ရေးပေးပါ
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းသာ ရေးစေချင်တယ် ။
မပြည့်မစုံရေးထားပေမဲ့ .. ဆိုလိုရင်းကို မှန်းဆပြီး .. ကော့မန့် ပြန်ရေးလိုက်ပါရဲ့နော် …။
TB ဆေးဆိုတာမျိုးက တစ်ရက်နှစ်ရက်နဲ့ သောက်ရတဲ့ ဆေးမျိုးမဟုတ်ပါဘူး … ။ တီဘီစစ်ပြီး မှသာ သက်ဆိုင်ရာ ဆေးခန်း ၊ ဆေးရုံကနေ သောက်သင့်မသောက်သင့် ဆုံးဖြတ်ပေးတာပါ …။ သောက်သင့် မသောက်သင့်ဆိုတဲ့နေရာမှာ …ပိုးတွေ့တဲ့ လူကတော့ သောက်ကို သောက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် … တချို့ ပိုးမရှိသော်လည်း သောက်ခိုင်းတာမျိုး ရှိပါတယ် .. ဘာလို့လဲဆိုတော့.. တစ်ချို့သော အဆုတ်ထဲရေ၀င်တာတို့ … အဆုတ်အနာဖြစ်နေတဲ့ လူနာတို့ကိုလည်း … အဲ့ဒီဆေးမှာပါဝင်တဲ့ အာနိသင်မျိုး လိုအပ်တယ်လို့ … ယူဆပြီး တိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ် … ။
တီဘီရောဂါပိုးရှိလို့ .. ဆေးသောက်ရမယ့်လူကတော့.. ဆေးသောက်ပျက်လို့ မရပါဘူး … အချိန်ကိုလည်း မှန်မှန်သောက်သင့်သလို .. .သောက်ရမယ့် အပိုင်းခြားထိလည်း(အနည်းဆုံးခြောက်လ) သောက်ရမယ်လို့လည်း .. မှတ်သားဖူးပါတယ် … ။ တီဘီဆေး ကို့စ် ကုန်သွားလို့ … ရပ်နားတော့မယ်ဆိုလျှင် ဆေးရုံဆေးခန်းနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး …သလိပ်တစ်ခါ ပြန်စစ်ရပါတယ် ..သလိပ်ထဲ ပိုး မရှိဘူး သေချာသွားတော့မှ ဆေးသောက်မှူကိုရပ်သင့်ပါတယ် … ။
တီဘီမရှိပဲ အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် ဆေးသောက်ဖို့ လိုတဲ့ လူနာတွေကတော့ … သက်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး လုပ်သားတွေ အကူညီနဲ့ …ရောဂါ ခံစားမှူပေါ် မူတည်ပြီး သောက်ရတယ်လို့ မှတ်သားဖူးခဲ့တယ် … ။ ရောဂါ အနည်းများကို လိုက်ပြီး သုံးလလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ် … ခြောက်လလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ် …အဲ့ထက်လည်း ပိုကြာ၊ ပိုတိုနိုင်တယ်လို့ သိရတယ် …။
တီဘီဆေးက ပြင်းပါတယ် … ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းလူတစ်ယောက် သောက်လျှင်တောင် .. အစာမ၀င်လျှင် ရက်ပိုင်းအ တွင်း ကမ္မဌာန်းရုပ်ပေါက်သွားနိုင်တာမို့ ….. ပိုးရှိလို့ သောက်ရမယ့်လူနာတစ်ချို့ကတော့ …တီဘီဆေးမသောက်ခင် … သလိပ်တစ်ခါပြန်စစ် ၊ ဓါတ်မှန်တစ်ခါ ပြန်ရိုက်ကြည့်ပြီး သေချာမှူ ရယူကြပါတယ် … ။
တခြားနယ်တွေမှာတော့ ဘယ်လိုလဲ မသိပေမယ့် ရန်ကုန်မှာတော့ .. တီဘီဆေးကို အခမဲ့ ဖြန့်ဝေတာပါ … ။ ကျန်းမာရေး ဌာနတွေမှာ တီဘီရှိကြောင်း အထောက်ထား အခိုင်မာ ပြသပြီး ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်
နယ်မှာတော့ တီဘီ ထင်ပီး တီဘီဆေး မှားတိုက်မိလို့ ပြဿနာတက်ရတဲ့ လူနာ တွေ့ဖူးပါတယ်
တစ်ချို့နယ်မြို့တွေမှာ အခမဲ့ မရဘူး ဗျ ၊
တီဘီဆေးမှားတိုက်တယ်ဆိုတာ … ဘယ်လိုမျိုးပါလိမ့် … တီဘီမတွေ့ပဲ ဆေးတိုက်တာကို ဆိုလိုချင်တာလို့ ထင်ပါတယ်နော် … ။
တီဘီဆေးက ပြင်းတဲ့အတွက် တကယ်တီဘီပိုးတွေ့မှ သာ သောက်ကြတာက များပါတယ် … အဲ့လို သေချာ သိရဖို့ဆိုလျှင် .. သလိပ်စစ်ရုံနဲ့ မလုံလောက်ပဲ ဓါတ်မှန်ပါ ရိုက်ကြည့်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ် … ဓါတ်မှန်ကရော သလိပ်အဖြေကပါ .. တီဘီပိုးရှိကြောင်း အတည်ပြုပြီပြီဆိုမှ … သောက်သင့်တာပါ … ။ ဆေးသောက်လို့ .. အချိန်ကာလတစ်ခုရောက်သွားပြီး .. ဆေးမရပ်ခင် …သလိပ်ပြန်စစ်ဖို့ကလည်း အရမ်းအရေးကြီးပါတယ် .. မဟုတ်လျှင် .. ပိုးမသေသေးပဲ တကျော့ပြန် ဒုက္ခပေးတတ်တာကြောင့်လို့ မှတ်သား ဖူးပါတယ် ။
ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်း … ဖိုးဖိုးဆေးရုံတတ်တုန်းက တီဘီမရှိပဲ တီဘီဆေးပေးတာ ကြုံခဲ့ဖူးတယ်… ။ မလိုအပ်ပဲပေးတယ် … ဆေးမှားပေးတယ်လို့ … မျက်မှန်စိမ်းတပ်ကြည့်ခဲ့ဘူးတယ် ..နောက်ပိုင်း မှ တီဘီဆေးက တီဘီရောဂါ တစ်ခုထဲအတွက်မဟုတ်ပဲ .. အဆုတ်နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ကိစ္စ တော်များများထိ တာသွားတယ်ဆိုတာ သိလို့ ဆေးသောက်ရမှန်းသိတာ … ။ ဆေးက ပြင်းတဲ့အတွက် … သောက်မယ့်လူကတော့ ….ကျန်မာရေး တောင့်တောင့် တင်းတင်းဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ် … ။ သောက်စမှာ ချက်ချင်း ရုပ်ကျသွားတတ်တာကိုး